Ngabe abesilisa abangabathandana nabesilisa abathandana nobungqingili yibo okubhekiswe kubo ngokuyinhloko? Isisekelo sesayensi: UMartin Vrijland
Ngabe abesilisa abangabathandana nabesilisa abathandana nobungqingili yibo okubhekiswe kubo ngokuyinhloko? Isisekelo sesayensi
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-26 March 2020	• 15 Amazwana
Esihlokweni esenziwe ngu NRC namuhla kuba sobala ukuthi ikakhulukazi amadoda nabadala bayabulawa yi-coronavirus. Ukucashunwa kuleso sihloko: EInkinga enkulu nge-Covid-19 yisiphepho okuthiwa yi-cytokine, esingenzeka lapho induna yegciwane iba namandla kakhulu. Kuyindlela eqinile engalawuliwe yamasosha omzimba ngokumelene nenani elikhulu legciwane, okulimaza futhi ngamabomu ukulimaza kakhulu umzimba. "Ukuphendula kwamasosha omzimba ekuthelelekeni kulawulwa yizakhi zofuzo eziku-X chromosome."
Ku-athikili engezansi ngingathanda ukukukhombisa ukuthi kungani kubonakala sengathi nalapha futhi isibikezeli, esishiwo lapha esizeni, siyaphuma.
In lesi sihloko ngesihloko esithi 'Kuthi 'uvukile' omusha (uvukile), indoda emhlophe ethandana nabesilisa engafani nayo inikezwe isikhathi eside kakhulu, Ngichaze ukuthi ukuhlaselwa kwendoda engafani nobungqingili kubukeka sengathi kuqale kanjani. Ukucashunwa kuleso sihloko: “.Uma ubungqingili abamhlophe busebenzise umhlaba lo isikhathi eside kangaka, kungahle kubhekwane nawo."
Ukubamba okungenhla okushiwo yi-NRC, okumangazayo ngokwanele, i-coronavirus nayo kubonakala sengathi inokuthanda kwakhe lapha. Kungenzeka yini ukuthi sibhekene nesikhali sezinto eziphilayo lapha ngemuva kwakho konke? Igciwane ngokwakhiwa? Kungenzeka kucace ukuthi asebekhulile bazwela kakhulu ukutheleleka ngegciwane noma kunjalo, kodwa i-NRC Article ikhombisa ngokusobala ukuthi le ndoda isengcupheni. Kungani ngikhuluma ngendoda engathandani nobungqingili njengeyona nto okuyiyona okuhloswe ngayo?
Unembile. Okokuqala, kufanele wazi ukuthi abesifazane bane-chXosome ye-XX kanti abesilisa bane-chromosome ye-XY. Futhi i-athikili ye-NRC ithi: "Ukuphendula kwamasosha omzimba ekuthelelekeni kulawulwa yizakhi zofuzo eziku-X chromosome." Ngakho-ke abesifazane benza impendulo enkulu kunegciwane ngokuya ngale ndlela yokucabanga. Ngemuva kwakho konke, bane-chromosome engu-X kabili. Abesilisa bane-chromosome ye-XY ngakho-ke kabili iba ne-chromosome engu-X. Ngokusho kokucabanga kwe-NRC, ngakho-ke banethuba elingxenyeni lokwakha uhlelo lokuvikela imvelo. I-NRC iza negrafu engezansi eqinisekisa lesi sithombe kahle. (Qhubeka ufunde ngezansi kweshadi)
Kungani-ke ngicabanga ukuthi i-coronavirus ikhetha ikakhulukazi i- abathandanayo umuntu ubonakala enayo? Hhayi, ezihlokweni eziningana lapha kuwebhusayithi ngikuchazile ukuthi bekuyaziwa kusukela ngasekupheleni kwawo-XNUMX ukuthi ukufakwa kokufakwa emzimbeni (i-IVF) kuhambisane nento eyinqaba ebizwa ngokuthi yi- 'chimeric effect'. Lowo 'umphumela we-chimeric' uqanjwe ngemuva kokuwela kwezinhlobo zezilwane ezimbili, lapho onazo okungenani zombili. Kusuka koyedwa ucwaningo oluvela ku-1998 Amaqanda we-IVF manje akhombisa ithuba lama-33% lezingane ezizalwe ngama-chromosomes womabili. Uma-ke (ngamabomu) ubeka lawo maqanda emuva esibelethweni, udala sonke isizukulwane sezilwane 'androgynous', ngaphandle kwalokhu kubonakala ngokusobala ngesimo se-hermaphrodite.
Ngachaza leyo mfundo ngokuningiliziwe lesi sihloko. Ngichaza nokuthi imithini yokugoma ikhula kumaseli we-fetus (isilwane noma esomuntu). Lawo maseli e-fetus nawo aqukethe ama-chromosomes. In lesi sihloko Ngichaza ukuthi injwayelo engamasonto angama-22 futhi ibukeka kanjani idlala indima kulokhu. Uma ufaka ingane nge-XY chromosome (umfana) ngomgomo wokukhula kumaseli we-fetus wamantombazane (i-XX chromosome), khona-ke lowo mphumela we-chimeric nawo ubonakala uthobekile. Isibonelo, ngacabanga ukuthi kubonakala sengathi ohulumeni badale ngasese izizukulwane ze-chimera amashumishumi eminyaka besebenzisa amasu amabili ashiwo.
I-Lucifer / Baphomet umthombo we-chimeric androgynous: wikipedia.org
Elinye igama elithi 'chimera' lithi 'androgynous'. Ezihlokweni ezishiwo, ngichaza ukuthi lokhu kugqama kwenzeka ngoba lezi zingane zine-XX kanye ne-XY chromosome. Ngakho-ke banokuncane kwabo bobabili. Kwesinye isikhathi ingane enjalo ibukeka njengomfana, kwesinye isikhathi njengentombazane, kwesinye isikhathi ingaba nezitho zangasese ezimbili bese kuthi i-XX / XY chimera ivele ngokuhlukahluka okuningi. Ngabe kukhona okubonayo kulokho okuvela kwisifushaniso se-LGBTI? Ungakhula 'owesilisa ngokomzimba', kepha ungathuthukisa ingqondo yabesifazane bese uwe phezu kwabesilisa. Konke ukuhlangana kungenzeka futhi kwesinye isikhathi 'uphakathi' noma uyangabaza njalo (Queer).
Ngakho-ke lapho ngithola lokhu, ngabhala isihloko ngesihloko esithi 'Ushintsho olukhulu: UMartin Vrijland ulungele umphakathi we-LGBTI! ' Ngokushesha kwacaca kimi ukuthi kungani izingane ezikoleni zamabanga aphansi namuhla zifunda ukuthi zisakwazi ukukhetha ubulili bazo. Yize kunjalo, iningi lalezi zingane kungenzeka ukuthi zinazo zombili i-XX ne-XY chromosome ngakho-ke zingama-XX / XY chimera. Kunjengokungathi, 'abathathi hlangothi ubulili'. Ngiphinde ngaqonda kungazelelwe ukuthi ukuthinta kuphi amathoyilethi angathathi hlangothi ngokobulili kanye nenkulumo engathathi hlangothi ngokobulili? Ngabe ibikhona i-ajenda ngemuva kwalokhu?
Hhayi-ke, uma sibuyela emuva ekubonisaneni neNRC isikhashana, kukhona elinye iqembu elibonakala lingasasebenzi ngokuphelele, futhi labo yizingane ezincane. Ngakho-ke futhi kubonakala kunengqondo kulokhu. Ngemuva kwakho konke, uma izingane zohlobo lwe-chimera ngazo zombili i-XX ne-XY chromosome zisebenze amashumishumi eminyaka, zizobe ziphindwe kathathu i-chromosome yazo emizimbeni yazo. Benza (ngokusho kokucabanga kwe-NRC) amasosha amaningi omzimba ngokumelene naleli gciwane futhi angakwazi ukungeneka.
Eureka! Ingabe i-coronavirus iyisikhali se-bio ngemuva kokufaka i-Luciferian 'yobulili ukungathathi hlangothi' emhlabeni jikelele? Ingabe i-coronavirus iyi-bioweapon yokuqothulwa okukhulu kwendoda engathandani nabadala? Ngabe lapha sifakaza ngegciwane leLuciferian engiluchazayo encwadini yami? Igrafu iyazikhulumela. Noma ingabe kungukubandakanya konke ukusebenza ngezinhloso eziningi njengokufana okungenhla, kanye nokuhlelwa kabusha komnotho nokubusa, okubandakanya ukukhishwa kwemali? Noma kumane kuyigciwane elibi elizenzakalelayo nje? Ngitshele .. Funda izibikezeli ezisencwadini.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: nrc.nl, nejm.org
Ngabe i-IVF nemijovo yokugoma iholele ezizukulwaneni zezingane ezithandanayo?
Ushintsho olukhulu: UMartin Vrijland umela umphakathi we-LGBTI!
Yini esivivinyweni esithatha amasonto angama-22 futhi kungenzeka yini ukuthi kushintshe ubulili bengane?
Uhlelo lokugomela lukazwelonke: "thola ukuhlolwa kwamaviki angama-22!" .. ingane yakho izokwenziwa i-hermaphrodite
Inkulumo-ze yokunyamalala kokubhaliswa ngokobulili
Amathegi: 63%, i-chimeric, ama-chimera, chromosome, coronavirus, Covid-19, afakiwe, ukungahambisani nobulili, I-IVF, umfana omncane, izingane, LHBTI, mannelijk, amadoda, intombazane, amaphesenti, ukugoma, imithi, i-voorkeur, ikakhulukazi, insikazi, abesifazane, X, XX, XY
27 March 2020 ku-00: 00
BREAKING IZINDABA! Ucwaningo lwakamuva olushicilelwe Ososayensi BaseShayina Abathi ICoronavirus Might Render fulani Iziguli Zesilisa
Umthombo: Thailand Medical News Feb 16, 2020 1 ngenyanga edlule
Ucwaningo lwakamuva lwe-coronavirus olwenziwe ososayensi bezokwelapha baseNanjing Medical University naseSuzhou Hospital oluholwa nguDkt Jianqing Wang, iNhloko yoMnyango Wezemvelo, esibhedlela iSuzhou bathi abanye abesilisa abathintekile yi-SARS-Cov2 coronavirus ebanga isifo se-Covid-19 ziba yize noma zilulame ekuthelelekeni.
27 March 2020 ku-00: 01
Lala ubuso phansi futhi ukhukhumele…
Umhlatshelo omkhulu weLuciferian? Ngomhlatshelo, ubuso kufanele buhle.
27 March 2020 ku-00: 03
Umqondo weFacedown wonke, uvela ekufundeni umBhalo kanye nokubona ukuthi bangaki abakhonzayo ababebhekene nabo ekukhonzeni kwabo. U-Abrahama wayengumkhulekeli wobuso, uMose, uDavid, u-Aaron, uHezekeli, uDaniel - futhi lokho nje ukubala abambalwa. Ubheka ukuguqulwa kukaJesu kukaJesu, ngisho abafundi bakhe babhekana ubuso nobuso. Ufika encwadini yesambulo futhi kuningi kakhulu ukukhonzwa okubhekene nakho.
Kungani ufuna ukwazi lokhu? wabhala:
29 March 2020 ku-09: 48
Isikhundla esithambekele futhi sinesizathu sokuzalwa. Ukushintshwa kwegesi emaphashini kusebenza kahle kuleso sikhundla. Lesi sikhundla sisetshenziswa kaningi ezigulini eza e-ICU ngezinkinga zokuphefumula ezinamandla.
Kusesimweni esihle manje ukuthi into ejwayelekile ingeniswe njengento ekhethekile. Abantu basabela ezithombeni ezinjalo ngemizwa enamandla.
27 March 2020 ku-10: 15
Ngakho-ke uma ngiqonda kahle kunegciwane elivele ngephutha, elibi kakhulu (ISELF-GROWN IN SECRET) nalo elibanga “ukungazalisi ngengozi” emadodeni aqondile.
Ngakho-ke zingakhomba igciwane? , futhi ukusola ngegciwane, into engabonakali. Futhi bageze izandla zabo bumsulwa
Harry qhwa wabhala:
27 March 2020 ku-19: 20
Futhi umkhuhlane waseSpain ngonyaka we-1918/19 (uma ungazikholelwa izindaba) ubonakala ukhethekile kakhulu ngomqondo wokuthi inani elikhulu lezinsizwa eliphakathi kuka-20 no-25 lawela kulo.
27 March 2020 ku-10: 07
Isabelo Sabasebenzi be-IMB:
"Uma i-Vrijland isondelene nomlilo, ngeke iphendule, futhi izoqhubeka kwezinye izihloko"
Ngemuva kwakho konke, uma kungekho muntu okuqaphelayo, kuzoba kubanda kancane ... noma ingabe ukubuyisela emuva emuva isimo kuleli zwe lebutho lomphakathi le-kedia social?
Lokho kuveza umphumela walokhu: Uma kungekho abezindaba noma "enye imidiya" ebhala ngakho, kungahle kube ukucabanga kwalowo Freeland paranoid.
"Indlela engcono kakhulu yokulawula ukuvota ukuyihola ngokwakho" futhi ngaphezu kwalokho uthuke wonke umuntu ongamukeleki enkundleni yokudlala .. Ngempela uJenene u-Alex Jones uhola impi yolwazi ..
27 March 2020 ku-12: 45
Labo bantu abalungile, ngoba uma ngabe ungumuntu ophethe ukulawulwa ngokwakho. Ngabe wenza kabi kakhulu. Ngokudlula kakhulu kunenye. Ngeke ukuthole okubhala kwenye indawo.
28 March 2020 ku-09: 58
Ungaqhathanisa ama-IMB (ama-inoffizieller ku-GDR) nama-NSBérs (phakathi neMpi Yezwe Yesibili)
Lezo ziluhlobo olubi kakhulu lwabakhaphi ngenkathi omama nobaba bethu
sifundise ngokwethembeka nokwethembeka.
Bheka lesi siqeshana seTV seSikole esihle
Uyazi ukuthi ngubani iMeya manje okuyiDolobha / Idolobha lakho, lapha kuchazwa ukuthi ungaba yimeya kanjani
27 March 2020 ku-10: 59
Ngenhlanhla, iDe Telegraaf ihlala ifundeka lapha…
Isiguli esincane sesishonile. Uma kuyiqiniso, lokho kubi, kunjalo, kepha uma kuyingane engagcinwanga, engazalwa nge-IVF (funda: ayikho i-XX / XY chimera), isengakwazi. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona kwe-chromosome engu-X akusona isiqinisekiso, njengoba ubona kwigrafu nesiqeshana se-NRC. I-chromosome engu-X, nokho, ihlasela leli gciwane futhi i-Y ayi ... Yebo ihlala iyimbi, konke lokho kufa okukhonjiswe kithi ngabezindaba.
27 March 2020 ku-11: 03
I-PS Funda amalungelo obunikazi wokugomela ukuthi atholakale ku-inthanethi futhi ubone ukuthi ubona igama elithi 'chimera' noma 'i-chimeric' livela kwenye indawo ... lelo gama limele ngempela ..
29 March 2020 ku-00: 14
Cishe bafunda kancane lapha naleli phephandaba elibhale ngo-'40 / '45 ngalowo mbuso wobushiqela obungalindelekile. Manje ngokuzumayo umntwana ubuye abe yi-spool ... okungenani lokho kuphakamisa isihloko sendatshana. Uma uyifunda kahle, empeleni ingane akuyona i-spool, kepha abantu abaningi bafunda isihloko kuphela ...
Ngabe lokho bekuyolulaza umbono kaVrijland? Cha, lokho kusikisela isihloko nje. Lokhu (okungenzeka) i-XX / XY ingane ye-chimeric ngeke ibe nazo noma yiziphi izimpawu. Ngemuva kwakho konke, ine-3x chromosome engu-X.
Futhi zonke izingane eziseNetherlands ziye zathola isithende sesithende (i-chromosome mhlawumbe?) Futhi iningi labomama seliphasile isikejana samasonto angama-22 (i-chromosome mhlawumbe?) Futhi izingane eziningi zingane ze-IVF.
27 March 2020 ku-11: 04
Wonke umuntu uyathengiswa!
UFrank Holland wabhala:
28 March 2020 ku-09: 25
Bafowethu abathandekayo abathandekayo,
Sola ukuthi uHr Vrijland ufikile ngendlela eyiyo nakho konke ukuhlaziya kwakhe, bheka lapha ku-het Parool
ipipi lentatheli esezingeni eliphakeme, ukuthi litshona kanjani ngendlela yokuthi kube yingqophamlando yokuthi amadoda aqondile maningi amathuba okuthi alimale yileli gciwane eliyi-19 eliseduze kunamanye. Isayensi ikuthola konke. Ukuhlangana, iqiniso, akukho kule ndaba.
28 March 2020 ku-12: 23
Futhi siyaqhubeka, manje ukukhuluphala kuyanezelelwa. Kungenzeka ube nethonya elithile. Kepha kukhona kunoma iyiphi enye injongo. Hlwanyela ukuhlukanisa okungaphezulu. Ilingana kahle esithombeni sokukhuluphala eMelika. Ngakho-ke iCorona iba yingozi ngokwengeziwe.
« IMeya yase-Italy isabisa ukuthumela ama-firethrowers ukuyolwa ne-coronavirus
ICoronavirus, Q Anon, uTrump, iBolsonaro, iBoJo, ukujula nokuvalwa kwe-inthanethi ngo-Ephreli 1? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.246.368
ICoronavirus, Q Anon, uTrump, iBolsonaro, iBoJo, ukujula nokuvalwa kwe-inthanethi ngo-Ephreli 1?
IMeya yase-Italy isabisa ukuthumela ama-firethrowers ukuyolwa ne-coronavirus
I-Trump, Q-Anon kanye 'nokuhlanza inganekwane' (uRobert Jensen, uJanet Ossebaard)
UMartin Vrijland op ICoronavirus, Q Anon, uTrump, iBolsonaro, iBoJo, ukujula nokuvalwa kwe-inthanethi ngo-Ephreli 1?
MX op ICoronavirus, Q Anon, uTrump, iBolsonaro, iBoJo, ukujula nokuvalwa kwe-inthanethi ngo-Ephreli 1?
Kungani ufuna ukwazi lokhu? op ICoronavirus, Q Anon, uTrump, iBolsonaro, iBoJo, ukujula nokuvalwa kwe-inthanethi ngo-Ephreli 1?
ellysa op I-Bill Gates 'quantum dots' ikhadi le-ID engenantambo eligcina ukuthi une-coronavirus nokuthi ingabe ugonyelwe
Ikhamera ye-2 op I-Trump, Q-Anon kanye 'nokuhlanza inganekwane' (uRobert Jensen, uJanet Ossebaard)